Sexual Desire In Men Of Old Age - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Sexual Desire In Men Of Old Age
“ဆရာ… ကြှနျတျော ဝငျခဲ့မယျနျော”
အသံနဲ့အတူ သကျလတျပိုငျး အမြိုးသားတဈယောကျ ဆေးခနျး ထဲကို ဝငျလာတယျ။ ကွညျ့လိုကျတော့ မတှတေ့ာ ကွာပွီဖွဈတဲ့ ကိုပိုငျ… ကြှနျတျောနဲ့ ငယျစဉျကတညျးက ရငျးနှီးပွီးသား… အိမျခငျြးကပျရပျနသှေားဖူးသူ….။
“လာဗြာ….ကိုပိုငျ…. မတှတေ့ာ ကွာပွီ… ဘာထူးလဲ ”
“ကိစ်စကတော့ ထူးတယျပွောလဲ ဖွဈ… မထူးဘူးပွောလဲ ဖွဈတာပဲ ဆရာရေ”
“ဒီလိုဗြ…. ဟိုတလောက ကြှနျတေျာ့ အပေါငျးအသငျး တှနေဲ့ ဆုံတော့…. အငွငျးအခုနျလေးတဈခုဖွဈကွတယျ… ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ဆရာရယျ…. အသကျကွီးလာတဲ့အခါ လိငျစှမျးဆောငျရညျ ကမြကြ သိခငျြကွတာ… ကြှနျတျောတို့အရှယျကလဲ လေးဆယျတနျးရောကျပွီဆိုတော့ သိခငျြလာလို့ ဆရာရေ”
မကျြနှာနီနီနဲ့ ရှကျကိုးရှကျကနျးမေးလာတဲ့ ကိုပိုငျ့ကွောငျ့ ကြှနျတျော ရယျမောဖွဈသှားတယျ..။
“ဟုတျကဲ့ပါ.. ကိုပိုငျရေ… ကိုပိုငျ သိခငြိတာ ကောငျးပါတယျ….ဒါလဲ ကိုယျ့ကနျြးမာရေး လူမှူရေးနဲ့ ဆကျနှယျနတေဲ့ ကိစ်စ ပဲလေ..နော့”
“ပွောရရငျတော့ ကိုပိုငျရေ…. လူတဈယောကျအသကျကွီးလာရငျ လိငျစှမျးဆောငျရညိ ကမြကဆြိုတာ ယဘြေူယအြားဖွငျ့ ခွုံပွောရရငျတော့ သူလူငယျတုနျးကနဲ့ ယှဉျရငျတော့ ကတြတျတယျပဲဆိုရမယျ….”
“တခြို့ကတြော့လဲ ဖှဲတဈဆုပျနိုငျရုံနဲ့ စှမျးသေးတယျ ဘာညာပွောကွတာကရော ဆရာ”
“မှနျတယျ…. ကိုပိုငျ… ဒီစကားကလဲ အလဟသတျပျေါလာတာတော့ မဟုတျဘူး…. အသကျအရှယျ ရလာတဲ့အခါ သူငယျစဉျတုနျးကထကျစာရငျ…. testosterone လို့ချေါတဲ့ ကြားဟျောမုနိးပမာဏ ကလြာတတျတယျ…. စိတျပါဝငျမှူလဲ နညျးလာနိုငျတယျ…လိငျအဂျါက ထိတှမှေု့ကိုသိနိုငျစှမျးလဲ လြော့နညျးလာတတျတယျ…ထောငျမတျနိုငျစှမျးတှေ ကတြတျတယျ…
ဒါပမေယျ့ ဒါက ယဘြေုယသြဘောသကျသကျကို ပွောတာပါ… လူတဈယောကျခငျြးစီအလိုကျ လိငျစိတျနဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ဟာ ကှဲပွားမှူ ရှိတယျဗြို့…
တခြို့ အသကျရှဈတယျတှငျး ရောကျနပေမေယျ့ ပုံမှနျစှမျးဆောငျနိုငျနတောတှလေဲ ရှိတတျတာပဲ… ဒါကွောငျ့လဲ ဒီလို စကားပုံ တှပေျေါလာတာ”
“တခြို့တှကေ ဆရာပွောတဲ့ ကြားဟျောမုနျးဆေးကို ထိုးကွတာတှလေဲ ကွားဖူးတယျ… အဲဒါ ကောငျးလာဆရာ…ထိုးသငျ့လား”
“ဒီလိုဗြ…. ထိုးသငျ့တယျ မထိုးသငျ့ဘူး မပွောခငျ…ဒီဆေးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး တှလေဲ သိထားသငျ့တယျဗြ…. သှေးတိုး နှလုံးသှေးကွောကဉျြး အသညျးရောဂါနဲ့ လဖွေတျနိုငျခွတှေေ ဒီဆေးက မြားစတေယျဗြ… တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ကနျြးမာရေး အခွအေနတှေကေ လဲ မတူနိုငျကွတော့ သကျဆိုငျရာ ဆရာဂနျနဲ့သခြောအရငျ တိုငျပငျပွီးမှ ထိုးမထိုး ဆုံးဖွတျသငျ့တယျ ကိုပိုငျရေ ”
“ကြေးဇူးပဲ ဆရာရေ…. ဆရာပွောမှပဲ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သဘောပေါကျသငျ့တယျ… ကြှနျတျောသာဆိုရငျတော့ တျောရုံ နဲ့ ထိုးဖွဈမယျမထငျဘူး ဆရာရေ…. ကိုယျ့အသကျထကျစာရငျတော့ လိငျကိစ်စဆိုတာက အရေးကွီးလှနျးတဲ့ ကိစ်စတော့မဟုတျဘူးမလား… တျောရုံ စှမျးဆောငျရညျ ကတော့ လူတိုငျးမှာ ရှိတာပဲ… တနျဆေး လှနျဘေးဆိုသလိုပေါ့ ဆရာရယျ…နျော”
“သိပျမှနျတာပေါ့ ကိုပိုငျရေ….. အသကျကွီးလို့ စှမျးဆောငျရညျကတြယျဆိုတာက လူတိုငျးမှာလဲ ဖွဈခငျြမှ ဖွဈမှာပါ… နောကျတခု ဒီလိုစှမျးဆောငျရညျဆိုတာက အရှယျတဈခုတညျးကွောငျ့သာမက…. စိတျဖိစီးမှူမြားတာ ပငျပနျးလှနျးတာ.. အလုပျအကိုငျနဲ့ပတျသကျတဲ့ ဖိအားတှရှေိနတော… နာတာရှညျ ဂေါဂါတခုခုရှိနတော… အဲ… တခြို့ဆေးဝါးတှေ…ဒီလိုအခကျြတှကွေောငျ့လဲ ကနြိုငျသေးသတဲ့ ကိုပိုငျရ…. နောကျအရေးကွီးတဲ့ တဈခကျြက ကိုယျ့ရဲ့ partner သို့မဟုတျ အိမျထောငျဖကျ နဲ့ ရငျးနှီးခိုငျမာအဆငျပွတေဲ့ relationship မြိုးရှိခွငျးမရှိခွငျးကလဲ…. လိငျစှမျးဆောငျရညိ အပျေါ သကျရောကျမှူရှိသတဲ့ဗြာ”
“သဘောပေါကျပွီ ဆရာရေ့….. ဒီလိုဆို ကိုယျ့တဈကိုယျရညျကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျတာက ခန်ဓာကိုယျကနျြးမာရေး အတှကျသာမက… ဒီလိုစှမျးဆောငျရညျအပါအဝငျ တခွားကိစ်စတှမှောပါ ကောငျးကြိုးပွုနိုငျတာပေါ့နျော… ဆရာ”
“ဒါပေါ့ဗြာ…လိငျကိစ်စ တခုတညျးမဟုတျဘဲ အခွားကနျြးမာရေး… လူမှူရေး… တှမှော ခကျြညီညီနဲ့ balanced life ကိုထားရှိတာ….ကိုယျ့မှာရှိတဲ့အရာတှကေို ရောငျ့ရဲ တနျဖိုးထား တတျရငျ ကနြေပျနှဈသိမျ့ဖှယျ ဘဝကို အရှယျသုံးပါးမရှေး ရနိုငျပါတယျ ဗြ”
“ဟုတျကဲ့ပါ..ဆရာရေ့… ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျသလို ဗဟုသုတလဲ ရတယျဗြို့…နောကျလဲ လာခဲ့ပါဦးမယျ”
ပွောပွီး တကျကွှတဲ့ ခွလှေမျးတှနေဲ့ ဆေးခနျးက ပွနျထှကျသှားတဲ့ ကိုပိုငျ့ကိုကွညျ့ရငျး ကြှနျတျော ပွုံးနမေိပါတော့တယျ….။
“ဆရာ… ကျွန်တော် ဝင်ခဲ့မယ်နော်”
အသံနဲ့အတူ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသားတစ်ယောက် ဆေးခန်း ထဲကို ဝင်လာတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ မတွေ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုပိုင်… ကျွန်တော်နဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရင်းနှီးပြီးသား… အိမ်ချင်းကပ်ရပ်နေသွားဖူးသူ….။
“လာဗျာ….ကိုပိုင်…. မတွေ့တာ ကြာပြီ… ဘာထူးလဲ ”
“ကိစ္စကတော့ ထူးတယ်ပြောလဲ ဖြစ်… မထူးဘူးပြောလဲ ဖြစ်တာပဲ ဆရာရေ”
“ဒီလိုဗျ…. ဟိုတလောက ကျွန်တော့် အပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ ဆုံတော့…. အငြင်းအခုန်လေးတစ်ခုဖြစ်ကြတယ်… ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဆရာရယ်…. အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လိင်စွမ်းဆောင်ရည် ကျမကျ သိချင်ကြတာ… ကျွန်တော်တို့အရွယ်ကလဲ လေးဆယ်တန်းရောက်ပြီဆိုတော့ သိချင်လာလို့ ဆရာရေ”
မျက်နှာနီနီနဲ့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းမေးလာတဲ့ ကိုပိုင့်ကြောင့် ကျွန်တော် ရယ်မောဖြစ်သွားတယ်..။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ကိုပိုင်ရေ… ကိုပိုင် သိချငိတာ ကောင်းပါတယ်….ဒါလဲ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး လူမှူရေးနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စ ပဲလေ..နော့”
“ပြောရရင်တော့ ကိုပိုင်ရေ…. လူတစ်ယောက်အသက်ကြီးလာရင် လိင်စွမ်းဆောင်ရညိ ကျမကျဆိုတာ ယျေဘူယျအားဖြင့် ခြုံပြောရရင်တော့ သူလူငယ်တုန်းကနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ကျတတ်တယ်ပဲဆိုရမယ်….”
“တချို့ကျတော့လဲ ဖွဲတစ်ဆုပ်နိုင်ရုံနဲ့ စွမ်းသေးတယ် ဘာညာပြောကြတာကရော ဆရာ”
“မှန်တယ်…. ကိုပိုင်… ဒီစကားကလဲ အလဟသတ်ပေါ်လာတာတော့ မဟုတ်ဘူး…. အသက်အရွယ် ရလာတဲ့အခါ သူငယ်စဉ်တုန်းကထက်စာရင်…. testosterone လို့ခေါ်တဲ့ ကျားဟော်မုနိးပမာဏ ကျလာတတ်တယ်…. စိတ်ပါဝင်မှူလဲ နည်းလာနိုင်တယ်…လိင်အဂ်ါက ထိတွေ့မှုကိုသိနိုင်စွမ်းလဲ လျော့နည်းလာတတ်တယ်…ထောင်မတ်နိုင်စွမ်းတွေ ကျတတ်တယ်…
ဒါပေမယ့် ဒါက ယျေဘုယျသဘောသက်သက်ကို ပြောတာပါ… လူတစ်ယောက်ချင်းစီအလိုက် လိင်စိတ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဟာ ကွဲပြားမှူ ရှိတယ်ဗျို့…
တချို့ အသက်ရှစ်တယ်တွင်း ရောက်နေပေမယ့် ပုံမှန်စွမ်းဆောင်နိုင်နေတာတွေလဲ ရှိတတ်တာပဲ… ဒါကြောင့်လဲ ဒီလို စကားပုံ တွေပေါ်လာတာ”
“တချို့တွေက ဆရာပြောတဲ့ ကျားဟော်မုန်းဆေးကို ထိုးကြတာတွေလဲ ကြားဖူးတယ်… အဲဒါ ကောင်းလာဆရာ…ထိုးသင့်လား”
“ဒီလိုဗျ…. ထိုးသင့်တယ် မထိုးသင့်ဘူး မပြောခင်…ဒီဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တွေလဲ သိထားသင့်တယ်ဗျ…. သွေးတိုး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း အသည်းရောဂါနဲ့ လေဖြတ်နိုင်ခြေတွေ ဒီဆေးက များစေတယ်ဗျ… တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေက လဲ မတူနိုင်ကြတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဂန်နဲ့သေချာအရင် တိုင်ပင်ပြီးမှ ထိုးမထိုး ဆုံးဖြတ်သင့်တယ် ကိုပိုင်ရေ ”
“ကျေးဇူးပဲ ဆရာရေ…. ဆရာပြောမှပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်သင့်တယ်… ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ တော်ရုံ နဲ့ ထိုးဖြစ်မယ်မထင်ဘူး ဆရာရေ…. ကိုယ့်အသက်ထက်စာရင်တော့ လိင်ကိစ္စဆိုတာက အရေးကြီးလွန်းတဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးမလား… တော်ရုံ စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ လူတိုင်းမှာ ရှိတာပဲ… တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုသလိုပေါ့ ဆရာရယ်…နော်”
“သိပ်မှန်တာပေါ့ ကိုပိုင်ရေ….. အသက်ကြီးလို့ စွမ်းဆောင်ရည်ကျတယ်ဆိုတာက လူတိုင်းမှာလဲ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ… နောက်တခု ဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတာက အရွယ်တစ်ခုတည်းကြောင့်သာမက…. စိတ်ဖိစီးမှူများတာ ပင်ပန်းလွန်းတာ.. အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖိအားတွေရှိနေတာ… နာတာရှည် ဂေါဂါတခုခုရှိနေတာ… အဲ… တချို့ဆေးဝါးတွေ…ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်လဲ ကျနိုင်သေးသတဲ့ ကိုပိုင်ရ…. နောက်အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ partner သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ဖက် နဲ့ ရင်းနှီးခိုင်မာအဆင်ပြေတဲ့ relationship မျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းကလဲ…. လိင်စွမ်းဆောင်ရညိ အပေါ် သက်ရောက်မှူရှိသတဲ့ဗျာ”
“သဘောပေါက်ပြီ ဆရာရေ့….. ဒီလိုဆို ကိုယ့်တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တာက ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး အတွက်သာမက… ဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်အပါအဝင် တခြားကိစ္စတွေမှာပါ ကောင်းကျိုးပြုနိုင်တာပေါ့နော်… ဆရာ”
“ဒါပေါ့ဗျာ…လိင်ကိစ္စ တခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အခြားကျန်းမာရေး… လူမှူရေး… တွေမှာ ချက်ညီညီနဲ့ balanced life ကိုထားရှိတာ….ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာတွေကို ရောင့်ရဲ တန်ဖိုးထား တတ်ရင် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ဖွယ် ဘဝကို အရွယ်သုံးပါးမရွေး ရနိုင်ပါတယ် ဗျ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ..ဆရာရေ့… ကျေးဇူးအများကြီးတင်သလို ဗဟုသုတလဲ ရတယ်ဗျို့…နောက်လဲ လာခဲ့ပါဦးမယ်”
ပြောပြီး တက်ကြွတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ဆေးခန်းက ပြန်ထွက်သွားတဲ့ ကိုပိုင့်ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော် ပြုံးနေမိပါတော့တယ်….။